Boqollaal Ka Mid Ah Jabhadda ONLF Oo 20 Sannadood Ka Dib, Dib Ugu Laabtay Magaalada Jigjiga – somalilandtoday.com
Boqollaal Ka Mid Ah Jabhadda ONLF Oo 20 Sannadood Ka Dib, Dib Ugu Laabtay Magaalada Jigjiga
(SLT-Jigjiga)-Boqollaal ka tirsan ciidammada jabhadda hubeysan ee ONLF ayaa Maanta gaadhay magaalada Jigjiga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Labo diyaaradood oo siday ciidammadan oo ka soo kicitimay dalka Eritrea ayaa gaadhay Jigjiga, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen dadweyne, masuuliyiin iyo xubno jabhadda ka tirsan oo ku sugnaa Dowlad Deegaanka Soomaalida.
Ibraahim Maxamed Beddel oo ah madaxa ciidammada ONLF ee cutubka Maanta gaadhay Jigjiga ayaa BBC-da u sheegay in mas’uuliyiinta ururka ee ku sugan dalka Eritrea ay dabayaaqada bishan gaadhi doonaan Jigjiga sii loo ambaqaado dhaqan-gelinta heshiiskii dhexmaray iyaga iyo dowladda Itoobiya.
Wuxuu sheegay in wada nolaanshaha shacabka iyo ka shaqeynta horumarka ay tahay arrin ay shacabka ku dhiiro gelinayaan isla-markaasna lagu tallaabsan doono nabadda.
Cabdi Saxane Cumar oo ah abaanduulaha ONLF ee ka hawlgalayay gudaha Dowlad-Deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay mabda’a iyo fikirka ay wateen uu ahaa inay u halgamayeen danta shacabka ayna ku rajaweynayeen inay gaadhaan guusha “Waxaan is leeyahay mustaqbal, nolol, horumar iyo midnimo ayaa xigi doontaa Inshaa Allah” ayuu yidhi Saxane.
Wuxuu sheegay in wax dhibaato ah ayna dhexmari doonin iyaga iyo ciidammada Dowlad-Deegaanka ayna mid yihiin isla-markaanaa isbadallada ka dhacay waddanka Itoobiya ay u horseedeen in la gaadho heshiis nabadeed.
Dowladda Itoobiya ayaa ururka ONLF ka saartay liiska argagixisada si loo ambaaqado dib u heshiisiinta, nabadda iyo isbaddalada kasocda dalkaasi.